Kuwana zvakanakisa zvepasirese nyika neiyo hybrid smartwatch
Kunyangwe isu tichida mashandiro anopiwa nemawatchwatches, hapana kuramba kwekuti echinyakare, asiri-akangwara maziso anotarisa nzira zvirinani kazhinji kazhinji kwete. Kutenda kumusika wekukwikwidzana wemawachi akasanganiswa, zvinokwanisika kuwana chimwe chinhu chinoratidzika kunge wachi yenguva dzose asi ichiri kupa zvimwe zveakanakisa maficha ewatchwatch. Kana iwe uchifunga kuti hupenyu hwesanganiswa hunogona kunge huri hwako, heano aya atinokurudzira!
Yakananga yaitwa nemazvo
Fossil ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa maronda pamusika uye ayo emhando dzemhando dzakasarudzika. Iyo Fossil Hybrid HR inozvirumbidza kwemasvondo maviri ehupenyu hwebhatiri uye ine moyo-chiyero chekutarisa, chiitiko chekutevera, zviyeuchidzo zve smartphone, uye kutonga kwemimhanzi Inowanikwa mune akasiyana fashoni masitaera, futi.
$ 195 ku Amazon $ 195 kuFossil
Yedu yekutanga kutora pane iyi runyorwa ndeye Skagen Yakabatana. Iyo yakapfava, diki dhizaini chimwe chinhu chatisingakwanise kuwana chakaringana, ine 42mm kesi inoita kuti iyi isvike kune kunyangwe zvidiki zviuno. Iyo wachi inoteedzerawo nhanho dzako, kurara, uye inokuzivisa iwe paunowana runhare kana mameseji. Inotodzivirira mvura kusvika pamamita makumi matatu!
$ 129 kuSkagen $ 129 ku Amazon
Rarama hupenyu hwegoridhe
Zvisaririra Carlie Mbeu dzakauchikwa Smartwatch
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu zvishoma zvevakadzi uye zvechinyakare, iyo Fossil Carlie isarudzo yakanaka kwazvo. Iwe unozowana mukana wekuzivisa nezve smartphone, zviitiko zvekutevera, tsika yekumisikidza chinangwa, kurara kwekutarisa, uye zvimwe zvakawanda. Mawachi aya zvakare anodzivirira mvura kusvika pamamita makumi mashanu.
$ 175 ku Amazon $ 175 kuFossil
Withings Simbi HR
Iyo Withings Simbi HR ndiyo wachi yakasanganiswa yekuwana kana kuteedzera kwemuviri ndiko kukoshesa kwako kwekutanga. Inogona kuongorora kurova kwemoyo wako, ine 24/7 yekutevera zviitiko, kuongorora kurara, uye kunyangwe kusangana kweAki. Yese data yako inoenderana neiyo Health Mate app, uye kana zvasvika kune hupenyu hwebhatiri, iwe unofanirwa kuona kusvika kumazuva makumi maviri nemashanu pamutero.
$ 153 ku Amazon $ 144 kuAnings
Fossil Q Varume Hybrid Smartwatch
Fossil ndeimwe yevanonyanya kutsigira Google's Wear OS, asi iwe waiziva here kuti kambani inogadzira iwachi dzakauchikwa? Iyo Fossil Q Men's inouya nemwedzi mitanhatu yehupenyu hwebhatiri, mabhatani akagadziriswa, uye ngarava ine yakanakisa yeganda bhendi inopedzisa iyo 45mm nhema simbi kesi zvinoshamisa.
$ 155 ku Amazon $ 155 kuFossil
Chengetedza nguva yako yekuenda uye zvimwe zvinhu zvakawanda neFossil Commuter. Iyi hybrid smartwatch inovimbisa kusvika pagore rehupenyu hwebhatiri uye inouya mune akasiyana mavara sarudzo. Iyo inogona kuteedzera ako ekurara mapatani uye chiitiko, kusanganisira matanho akatorwa, macalorie akapiswa, uye daro rakafamba.
$ 61 ku Amazon $ 61 paWalmart
Imwe huru yekutarisisa yakasimbiswa yemuchina wakasanganiswa ndeye Garmin Vívomove HR. Wachi iyi inokwanisa 24/7 kurovera pamoyo, kuteedzera zviitiko, kutarisa kushushikana, uye hupenyu hurefu hwebhatiri izvo zvinokukwidza iwe kusvika kumazuva mashanu mune smart mode uye mavhiki maviri mune mode yekutarisa.
$ 160 ku Amazon $ 180 paWalmart
Nguva dzose mune chimiro
Zvakasarudzika Q Grant
Iyo Fossil Q Grant inoshanda senge mamwe maFossil watches pane ino runyorwa asi inopa imwe yakasarudzika dhizaini. Iyo kesi yesimbi isina simbi yakapetwa neintan basa rekupenda kutenderedza manhamba evaRoma. Kana iwe ukawedzera izvo kune chaiyo yeganda bhendi, iwe unowana zvechokwadi inoshamisa wachi.
$ 115 ku Amazon $ 107 paWalmart
Chekupedzisira asi zvirokwazvo chisiri chidiki, iyo Withings Mufambiro yakanaka bhajeti-yakanaka sarudzo asi usarega izvo zvichikunyengera. Wachi iyi yakazara nezvinhu, zvinosanganisira 24/7 yekutevera zviitiko, kurara yekutevera, yakabatana GPS, nezvimwe. Iwe unogona zvakare kuverenga pamwedzi gumi nemisere yehupenyu hwebhatiri. Chengetedza mari usingabayire zvinhu zvinonyanya kukosha.
$ 70 ku Amazon $ 70 pa Best Buy
Iyi yakasarudzika yemahara smartwatch kubva kuGarmin yakagadzirwa nesimbi isina mhando yepamusoro uye inouya nemhando dzakasiyana dzemavara. Iyo inogona kutaridzika kunge isina chimwe chinhu kunze kweyekunakidzwa wachi, asi kune zvakawanda pasi pechiso. Iwe unenge wakabatanidza GPS, yekutarisa kurara, moyo-rate yekutevera, uye anosvika mazuva mashanu ehupenyu hwebhatiri.
$ 250 ku Amazon $ 2500 pa Best Buy
Ivo avo vanoda wachi yemhando yepamusoro ine yakasimba seti yezvinhu vanozokoshesa iyo Zvakasarudzika Mbeu dzakauchikwa HR. Iyi modhi haina akashongedzerwa nekrini yekubata, saka iwe uchaita yako yekufambisa nemabhatani emativi matatu. Inowanikwa mukusiyana kwakawanda, kusanganisira nhema nhema ine bhendi reganda, utsi nesimbi isina simbi bhendi, uye sirivheri ine nhema nhema silicone bhendi.
Seizvo zita rinoratidzira, iwe unowana mukana weiyo yemoyo sensor neiyi hybrid smartwatch. Zvimwe kunze kweizvozvo, iwe unozonakidzwawo neyakakosha zviitiko zvekutevera, zviyeuchidzo zve smartphone, uye kuratidzwa kwazvinoita. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza ndiko kurova mavhiki maviri ehupenyu hwebhatiri.
Kune vanhu vanoda musanganiswa wakanaka weakanyanya aesthetics uye anobatsira smart maficha, iyo Skagen Yakabatana chisarudzo chakanakisa. Kwete chete inotaridzika seyakanaka kwazvo, asi ine nezve zvese zvinhu zvaunogona kukumbira uku uchiriwo yeimwe yeasina kudhura anotora pane ino runyorwa.
Kana izvo zvekutanga zvaive zvisina kukwana, zvakare zvinopa zvigadzirisike mabhatani, otomatiki nguva zone zone, uye anochinjika mabhendi. Hazvina mhosva kuti iwe urikuenda kupi kana zvauri kuita, iyi yakanaka wachi yekuve neyako yekutasva.
Kana iwe waifunga kuti Fossil smartwatches aingova evarume chete, fungidzira zvakare. Iyi yakanakisa yakasimuka yegoridhe sarudzo yakakodzera kune ese zuva rizere nemabasa uye manheru azere nekuyevedza. Zvakachengeteka kutaura kuti iwe unowana zvakanakisa zvese zviri zviviri nyika ne Zvisaririra Carlie Mbeu dzakauchikwa Smartwatch.
Iwe haufanire kumbonetseka nezve kuchaja kana kungobvumidzwa kune rimwe bhendi. Iyi modhi inopawo zvese zvekutanga zviitiko zvekutevera zvaunotarisira kubva kune yemasanganiswa smartwatch. Iyi ndiyo sarudzo yakanaka kune avo vasingade kusarudza pakati pechita uye basa.
Vanofarira kusimba vachange vari mumawoko akanaka neiyo Withings Simbi HR. Iwe unenge uine zvese zvaunoda munzvimbo imwechete, kusanganisira moyo wekutarisa uye Yakabatana GPS iyo inoratidza mepu yechikamu chako nedaro, kukwirira, uye kumhanya.
Iyo yakangwara OLED kuratidza ichakupa iwe neyese yakakosha data: nhanho, daro, macalorie, kurova kwemoyo, nguva dzealam, uye nezvimwe.
Fossil Varume Hybrid Smartwatch
Iyi hybrid smartwatch ndeyeavo vanoda wachi iyo yavanogona kudaidza yavo. Iyo Fossil Varume Hybrid Smartwatch inokubvumira kudzora mimhanzi yako, kutora mifananidzo, uye kuseta zviyeuchidzo zvinangwa.
Hausi kuwana foni yako here? Shandisa wachi yako kuiridzira. Kuwana antsy munzira? Shandisa wachi yako kutarisa yako yekufamba nguva. Ehezve, ine mabhesiki akafukidzwa futi. Iwe unenge uine yekutevera yekurara, nhanho, daro, uye macalorie akapiswa.
Paunenge uchingogara uchingoenda uye uchida yakavimbika yemahara smartwatch iwe yaunogona kuvimba nesitayile uye mashandiro, iyo Zvisaririra Zvifambiso ndiko kubheja kwako kwakanyanya. Kunze kwekutevera kurara uye chiitiko, zvakare inokupa iwe notisi dze smartphone, zvemimhanzi zvinodzora, uye kunyange zvinokutendera kuti utore pikicha.
Iwe unenge uchisuwa moyo-rate yekutarisa uye GPS neiyo wachi, asi iwe haugone kurova mutengo. Pasina kutaura, zviri nyore imwe yemafashoni emhando dzakasanganiswa smartwatches kunze uko. Rimwe gore rehupenyu hwebhatiri harisi rakaipa dhiri, futi.
Kana iwe uri kutsvaga kuti uve wakakomba nezve hutano hwako uye kugwinya zvachose, ungave wakasangana nemutambo wako ne Garmin Vívomove HR.
Kunze kwekutevera zviitiko zvekutevera uye yekutarisa kwemoyo, ino wachi inopawo zvekushandisa kutarisisa hukama. Iwe uchave nekugona kune ese-ezuva -kushushikana kuteedzera uye yekuzorora timer kuti ikubatsire iwe kugadzirisa kushushikana. Usakanganwa kuti inosanganisira yepamusoro yekurara yekutarisa neREM yekurara ruzivo.
Izvo hazvifanire kushamisika kuti iyo Zvakasarudzika Q Grant inoita zvese zvaunoda kuti ive nekiriniki yemafashoni, senge dzimwe sarudzo dzeFossil pane iri runyorwa. Izvo zvakanaka kune avo vane hanya nezve kutaridzika kwewachi yavo asi vachiri kuda mashandiro.
Iwe uchanakidzwa gore rebheteri hupenyu, mabhatani anogadziriswa, uye notices dzeApplephone dzinoziviswa neine hunyoro buzz pachiuno. Iyo yeRoma manhamba manhamba akasanganiswa neiyo chaiyo yeganda bhendi inowedzera kubata kwekirasi.
Iko hakuna nzira yekutenderedza chokwadi chekuti iyo Manheru Kufambisa yatora nyika nechisimba nezvose zvainogona kupa nemutengo wakaderera kudaro.
Nakidzwa ne24 / 7 chiitiko chekutevera, yekurara yekutevera, Smart Kumuka-neine chinyararire alarm, yakabatana GPS, ye-18-mwedzi bhatiri hupenyu, uye zvimwe. Iwe unozogona kuteedzera macalorie akapiswa uye daro rakafambiswa. Iwe haugone kurova zvese izvi maficha kana vauya nemutengo wakasarudzika wemutengo.
Unogona kunakirwa neyechinyakare wachi wachi uchine mukana wepachivande kune smartwatch maficha. Iyo Garmin Vivomove 3S inokupa chaizvo izvo. Iyi inoshamisa isina tsvina simbi yakasanganiswa ine yakavanzika AMOLED yekubata inobata iyo inongowoneka kana iwe uchiida.
Mukuwedzera kune anoyevedza mazuva mashanu ehupenyu hwebhatiri, iwe zvakare unokwanisa kuwana kwakabatana GPS, moyo-chiyero chekutarisa, chiitiko / kurara / kusagadzikana kwekutevera, uye zvimwe. Izvi zvingaite senge zvinodhura musanganiswa, asi kana iwe ukaona zvemhando yepamusoro zvinhu uye iyo refu runyorwa rwezvinhu, zvakaoma kunyunyuta.
$ 195 kubva kuAmazon
$ 195 kuFossil
Kurarama hupenyu hwesanganiswa
Kana iwe uri munhu anofarira echinyakare mawatch asi uchida kuve neine mashoma anobatsira smartwatch maficha akasaswa mukati, usatarise kumberi kupfuura iyo Fossil Hybrid HR. Iwe unowana 2+ mavhiki ehupenyu hwebhatiri, chiitiko chekutevera, zviyeuchidzo, uye moyo-chiyero chekutarisa.
Mufashoni wachi yenguva
$ 61 kubva kuAmazon
$ 61 paWalmart
Tevera izvo zvekutanga musitaira
Kana iwe uchida fashoni yekuona nguva ine mugove wayo wakanaka wezvinhu, enda neFossil Commuter. Iwe unokwanisa kuwana chiitiko uye yekurara yekutevera, akawanda nguva nzvimbo, nguva yekuenda, uye gore rehupenyu hwebhatiri. Inowanikwa mune akati wandei mavara. Iwe haufanire kupira kuda kwako kwefashoni newachi iyi.
$ 70 kubva kuAmazon
$ 70 pa Best Buy
Kufamba uye kuteedzera pamutengo unonzwisisika
Iwe haufanire kutyora bhangi kuti uwane mukana wehybrid smartwatch yakazara nezvinhu zvinobatsira. Iyo Withings Mhepo inopa isina musono yekutevera, otomatiki kuwiriranisa, uye yakabatana GPS. Izvo zvese zvaunoda uye chikwama chako chinokutenda nazvo.
Akanakisa Fossil smartwatches: Fossil Gen 5, Hybrid HR, uye zvimwe (Gumiguru 2020)
Unofanira kutenga iyo Samsung Galaxy Watch 3 LTE kana Fossil Gen 5 LTE?
Xiaomi Mi Tarisa Dzokororazve ongororo: Yakakura Mi Band
Pokémon Mhando, Simba & Utera - Kunda Hondo dzako muPokémon GO